CFA Fitaovana Fitaovana | China CFA Fitaovana mpanamboatra, mpamatsy
TR180W CFA Fitaovana
Ny fitaovana fandavahana CFA mifototra amin'ny teknika fandavahana sidina mitohy dia ampiasaina amin'ny fananganana mba hamoronana fantsona simenitra ary hanatontosana savaivony lehibe sy fananganana CFA. Izy io dia afaka manamboatra rindrina mitohy amin'ny beton nohamafisina izay miaro ny mpiasa mandritra ny fihadiana.
TR220W Fitaovana CFA
Fitaovana fandavahana CFA miorina amin'ny teknika fandavahana sidina mitohy izay ampiasaina amin'ny famoronana mba hamoronana fantsona simenitra. Ny paompy CFA dia manohy ny tombony amin'ny fantsona voatosika sy ny fantsona mankaleo, izay misy zavatra maro ary tsy mila fanesorana tany.
TR250W CFA Fitaovana
Fitaovana fandavahana CFA dia mety amin'ny fitaovana fandavahana solika, fitaovana fandavahana tsara, fitaovana fandavahana vato, fitaovana fandavahana lalana ary fitaovana fandavahana fototra.
Fitaovana fandavahana SINOVO CFA miorina amin'ny teknika fandavahana sidina mitohy izay ampiasaina amin'ny famoronana mba hamoronana paompy mivaingana. Izy io dia afaka manamboatra rindrina mitohy amin'ny beton nohamafisina izay miaro ny mpiasa mandritra ny fihadiana.
Fitaovana TR280W CFA
TR280W CFA fitaovana fandavahana rotary dia mety amin'ny fitaovana fandavahana solika, fitaovana fandavahana tsara, fitaovana fandavahana vato, fitaovana fandavahana lalana ary fitaovana fandavahana fototra.
TR280W CFA rotary fandavahana rig dia natao hisafidianana rig vaovao, izay mandray ny haitao mandroso amin'ny alàlan'ny hydraulic, mampiditra teknolojia fanaraha-maso elektronika mandroso. Ny zava-bitan'ny TR100D rotary fandavahana rotaka dia nahatratra ny fenitra manerantany. Ny fanatsarana mifanaraka amin'ny rafitra sy ny fanaraha-maso, izay mahatonga ny firafitra ho tsotra kokoa sy hamintina kokoa ny zava-bita azo antoka kokoa sy ny asa maha-olona kokoa.